Teboka vavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra
Teboka vavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka ho an'ny matahotra an'Andriamanitra lahy. Ny rafitry ny fanambadiana izay namboarin'Andriamanitra dia toy izany izay haharitra mandritra ny androm-piainana. Manaiky ianao amiko fa ny mandrakizay dia lava loatra handaniako ny lehilahy diso. Iray amin'ireo endrika na zavatra maro izay angatahin'ny vehivavy ho an'ny lehilahy tadiavin'izy ireo hipetrahany dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izany dia satria mino izy ireo fa manana ny fahatahorana an'Andriamanitra izy, dia tsy hiditra amina asa ratsy mety handratra ny fianakaviana.
Ny vehivavy rehetra dia maniry lehilahy izay hikarakara azy toy ny vehivavy tokana eto an-tany. Lehilahy izay hiaraka aminy amin'ny fotoana matevina sy manify, lehilahy hiasa ho pretra sy mpaminanin'ny trano. Na izany aza, vitsivitsy ihany no vonona hanao izay ilaina mba hananana izany karazana lehilahy izany. Ny zavatra iray tokony ho fantatra dia ny fahafoizan-tena rehetra. Raha zavatra ratsy no tadiavinao dia tokony ho vonona hahafoy zavatra ianao ho setrin'izany. Mahaliana anao ny hahafantatra fa ny ankamaroan'ny vehivavy izay maniry vady matahotra an'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra malalany akory. Tsy fantany fa ny lalina miantso ny lalina.
Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia manintona olona izay mizara toetra mitovy na toetra mitovy amintsika isika. Alohan'ny handinihantsika ireo lohahevitry ny vavaka dia andao hasongadino haingana ny sasany amin'ireo zavatra tokony hatao mba hahazoana vady matahotra an'Andriamanitra amin'ny vehivavy.
Zavatra tokony hatao hahazoana vady matahotra an'Andriamanitra
Atolory an'i Kristy ny fiainanao
Ny dingana voalohany mankany amin'ny fananana vady matahotra an'Andriamanitra dia ny manolotra ny fiainanao ho an'i Kristy amin'ny maha-vehivavy anao. Tsy afaka mahazo na inona na inona avy amin'ny fanjakana ianao rehefa tsy mpikambana ao amin'ny fanjakana. Tokony ho fantatrao fa Kristy sy Mpamonjy i Kristy. Tokony ho fantatrao fa i Kristy dia nirahin'Andriamanitra hampiely ny famonjena ny olona. Ny fahalalana an'io sy ny fanekena azy dia mahatonga anao ho mpikambana ao amin'ny fanjakana.
Avy eo ianao dia tsy maintsy torotoro, mahafoy ny fanao taloha ary mifikitra amin'ny hazo fijaliana.
Miezaha ho vehivavy tia an'Andriamanitra
Tsy ampy fotsiny ny hipetrahanao mivavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra rehefa zara raha fantatrao Andriamanitra. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny ho tonga vehivavy araka an'Andriamanitra. Ny maha-vehivavy araka an'Andriamanitra dia mihoatra ny antsoina hoe Kristiana ho an'ny anarany. Ny toetranao, ny toetranao ary ny zavatra rehetra momba anao dia tsy maintsy aseho an'i Kristy Jesosy.
Meteza ho vehivavy matahotra an'Andriamanitra
Ny zavatra iray tokony ho takatsika rehetra dia ny replika tonga lafatra an'ireo olona iarahantsika. Rehefa matahotra an'Andriamanitra amin'ny maha-vehivavy anao ianao, ny asan'ny Tompo dia noforonina tamin'ny fomba izay hahasarika lehilahy izay saika mitovy aminao ihany. Rehefa manana ny asan'Andriamanitra ianao dia ho manana fahalalana hahalalana ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra rehefa manomboka tonga ny mpangataka. Amin'izany dia tsy hipetraka ambany ianao satria fantatrao hoe iza ao amin'i Kristy Jesosy ianao.
Ray Tompo ô, misaotra anao aho tamin'ny andro feno fahasambarana toa an'ity. Misaotra anao aho noho ny fahasoavana nomenao ahy hitako androany, misaotra anao aho nanome anao fotoana hafa, fotoana iray hafa hanompoana anao bebe kokoa, fotoana hafa hanitsiana ireo tsy nety nataoko, fotoana iray hafa hitadiavana sy hahafantarana anao bebe kokoa, Tompoko hisandratra tokoa anie ny anaranao.Tompoko, mivavaka aho anio mba hitahianao vady tsara aho. Mandà ny hipetraka ambany aho. Mivavaka aho mba handefasanao ilay lehilahy namboarinao, ilay lehilahy namboarinao ho pretra ao amin'ny fianakaviana, ilay hijoro hiambina ny fianakaviana, mivavaka aho mba handefasanao azy. amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, araka ny voalazan'ny soratra masina, ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Mivavaka aho ho an'ny lehilahy marina manana fahendrena marina ary avy amin'Andriamanitra ny loharano. Mivavaka aho ho an'ny lehilahy izay hahafantatra anao bebe kokoa noho izaho, lehilahy izay matahotra anao noho izaho, lehilahy iray izay hanompo sy ho tia kokoa ny zavatr'Andriamanitra, mivavaka aho mba handefasanao azy amin'ny anaran'ny Jesosy.
Jesosy Tompo ô, tonga hamely ny endrika famitahana rehetra sy ny endrika miafina rehetra izay nomanin'ny fahavalo hanatona ahy aho. Mivavaka aho mba hanambaran'ny herin'Andriamanitra Tsitoha ny mombamomba ny zavaboary sandoka rehetra izay mety handefasan'ny fahavalo ny fotoako ary hampisehoany fijaliana amin'ny helo ety an-tany, mivavaka aho mba tsy hanana toerana ao am-poko amin'ilay anarana an'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba ampianaro ahy amin'ny zavatra tokony hatao aho. Mivavaka aho mba hitarihanao ny diako, mivavaka aho mba hisy fifandraisana masina eo anelanelako sy ilay lehilahy, mivavaka aho mba hahatonga anao hitranga eo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba homenao ahy fahendrena mety aho hiatrehana ilay lehilahy notendrenao ho ahy. Mivavaka aho mba hampianarinao ahy ny karazana valiny mety omena, mivavaka aho mba hiambina ny lelako amin'ny hafanam-po rehetra, mivavaka aho mba hamenoanao ny fahendrena ilaina mba hanomezana valiny marina amin'ny anaran'ny Jesosy.
Tompoko, mivavaka aho mba hampitaovanao an'ity lehilahy matahotra an'Andriamanitra ity karazana fahendrena mety ilainy ho vady lehibe. Mandresy ny fanahin'ny fahatezerana ao aminy aho, mananatra ny fanahin'ny herisetra ao aminy amin'ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, mivavaka aho anio mba hitahianao vady tsara aho. Mandà ny hipetraka ambany aho. Mivavaka aho mba handefasanao ilay lehilahy namboarinao, ilay lehilahy namboarinao ho pretra ao amin'ny fianakaviana, ilay hijoro hiambina ny fianakaviana, mivavaka aho mba handefasanao azy. amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, araka ny voalazan'ny soratra masina, ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Mivavaka aho ho an'ny lehilahy marina manana fahendrena marina ary avy amin'Andriamanitra ny loharano. Mivavaka aho ho an'ny lehilahy izay hahafantatra anao bebe kokoa noho izaho, lehilahy izay matahotra anao noho izaho, lehilahy iray izay hanompo sy ho tia kokoa ny zavatr'Andriamanitra, mivavaka aho mba handefasanao azy amin'ny anaran'ny Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba ampianaro ahy amin'ny zavatra tokony hatao aho. Mivavaka aho mba hitarihanao ny diako, mivavaka aho mba hisy fifandraisana masina eo anelanelako sy ilay lehilahy, mivavaka aho mba hahatonga anao hitranga eo amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba homenao ahy fahendrena mety aho hiatrehana ilay lehilahy notendrenao ho ahy. Mivavaka aho mba hampianarinao ahy ny karazana valiny mety omena, mivavaka aho mba hiambina ny lelako amin'ny hafanam-po rehetra, mivavaka aho mba hamenoanao ny fahendrena ilaina mba hanomezana valiny marina amin'ny anaran'ny Jesosy.
Ry Jesosy Tompoko, mananatra ny endrika fanahy rehetra aho, izay mety manandrana mampijaly ny fanambadiako, na dia efa nahazo ilay lehilahy sahaza anao ho anao aza aho. Mananatra mafy ny ratsy rehetra mety hataon'ny vady ara-panahy aho mba hanimba ny fanambadiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Vady matahotra an'Andriamanitra
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny faminaniana ratsy
Next lahatsoratraTeboka vavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra
Angeline chikweya Jiona 23, 2021 Ao amin'ny 5: 52 am
Mila vavaka mba hamerenana amin'ny laoniny
mpiasa mpiasa Jiona 23, 2021 Ao amin'ny 6: 42 am
Fa efa voasoratra fa raha misy te hiteny, dia avelao izy hiteny, araka ny holazain'Andriamanitra. Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra izay very rehetra aminao dia haverina amin'ny laoniny amin'ny anaran'i Jesosy.
Rehefa naverin'ny TOMPO ny babo an'i Ziona, dia tahaka ireo nanonofy isika, ary manambara ny famerenana amin'ny laoniny ny zavatra very rehetra tamin'ny anaran'i Jesosy. Hizara ny fijoroanao ho vavolombelona tsy ho ela ianao.
Vickey Washington 1 Jolay 2021 Amin'ny 12:47 hariva
Misaotra Ray Andriamanitra any an-danitra sy Jesosy zanakao. Raisiko amin'ny anarana mahery nataon'i Jesosy amena amena ny rehetra. Mangataka amin'Andriamanitra aho hitahy ahy amin'ny vady araka an 'Andriamanitra. Kristiana aho
Lluvia Cornelio 2 Jolay 2021 Amin'ny 7:45 maraina
Mivavaha azafady ho an'ny zanako sy ny fianakaviako manontolo, ao anatin'izany ny raiko zaza ronnie Joseph ankizy- Mendoza zanakalahin'i Alexander Mendoza Adam Mendoza sarobidy Garcia Anthony Morales Lilly Mendoza ny tenako Lluvia cornelio amin'ny famakian-tsaina ka nahatonga ny fikorontanan-tsaina tsy fahatokisana fahasosorana sy ny hatezerana tsy fitiavana intsony mampiray fianakaviana aminay fotsiny noho ny vehivavy te-hanatanteraka ny faniriany manokana amin'ny blackmagic tsy voafehiko izy manohy manova ny dadan'ny zanako ho olona mangatsiaka be dia be variana tezitra noho ny antony fotsiny dia mijery an'ity vehivavy ity manao izay tadiaviny manadino ny fianakaviany
Maria Nkgokgothi 17 Jolay 2021 Amin'ny 3:20 maraina
Hijoro ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nasareth 🙏 aho
Vavaka Hanao Fahagagana 50 ho an'ny fanasitranana diabeta
10 Foto-bavaka alohan'ny fandinihana Baiboly
Teboka vavaka hanoherana ny vaovao sy ny fomba ratsy